« Aoka tsy hisy olona hanao tsinotsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino hianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana » II Tim 4 - 12
Ny tahotra dia manakana anao tsy hahatanteraka tsara ny sitrapon’ Andriamanitra , manakana ny fahafahanao tsy hahavita zavatra tsara ary mety hanimba ny fiainanao mihitsy. Tsy tian’ Andriamanitra velively ny hahatonga ny antom-pisianao tototry ny tahotra .Mety ho kisendrasendra ve fa miisa 365 ny fiverenan’ny teny hoe :” Aza matahotra” ao anatin’ny Baiboly , izany hoe : 1 / isanandro mandritra ny taona . Tsy kamboty akory ianao, tsy irery ihany koa , satria Andriamanitra no Rainao . Ny Baiboly dia milaza hoe : “Tsy manan-tahotra ny fitiavana , fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra “ 1 Jaona 4:18 . Andriamanitra dia fitiavana . Arakaraky ny hamenoanao ny fiainanao an’ Andriamanitra no tsy hananan’ny tahotra ao anatinao . Rehefa mitsidika ao aminao ny tahotra dia izao no tsarovy :
Voalohany : tsarovy , fa ianao dia ao anatin’ny fianakaviamben’Andriamanitra . Raha misy olona na zavatra na toe-javatra miteraka tahotra ao aminao dia mijanona kely ary tsarovy fa ianao dia Zanak’ Andriamanitra . Tsy kamboty ianao ary tsy irery. Rainao Andriamanitra rehefa nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjinao ianao . Matanjaka Izy . Mahery noho ny mahery Izy .
Faharoa : Afaka manandratra ny feonao Aminy ianao , amin’ ny toerana rehetra, amin’ny fotoana rehetra , fa miandry anao Izy .Efa nandray ny fanahin’ny zanaka natsangana ianao , izay iantsoanao azy hoe : Ray ô ( Romana 8:15 ) . Efa nomeny anao ny Fanahiny hampitony anao . Andriamanitra no Tompon’ ny toe-java-misy rehetra . Antsoy Izy . Aza asiana fisalasalana izany . Apetraho eo Aminy ny fisalasalana rehetra . Raiso ny toky omeny noho ny fitiavany . Amena
Ho tahin'Andriamanitra isika rehetra
« . . . ary izay itoeran’ny Fanahin’ny Tompo no itoeran’ny FAHAFAHANA. »(2 Korintiana 3:17)
Tononinay aminao ny :
avy amin'ilay Ray mpahary antsika rehetra.
Mino zay fa hitondra zava-tsoa ho anao ny fitsidiana ato!
Mijereva finaritra ary dia ho tahian'Andriamanitra ô!
"MPANOMPOKO IANAO, EFA NOFIDIAKO KA TSY MBA ARIAKO” ISAIA 41:9
TIA ANAO JESOSY ARY IANAO?
MIANDRY ANAO IZY